China SAUVANA mveliso kunye nabenzi | Ifoto
Shiya imiqobo emva eluthulini
Isiseko sevili Ubungakanani:
Uqwalaselo Umgangatho / uLonwabo
Min. ukucoca umhlaba 220
Ukufuduswa 5MT / 6AT
Umzekelo F2.8 / G01
Umhlaba wangaphandle ugcwele uthando kunye nemiceli mngeni. Ingenzeka njani into yokuba ilizwe elizazisayo lihambe ngeemvakalelo ezityebileyo kwindawo ngaphandle kweFoton SAUVANA. Ngenxa yodidi oluphezulu kunye nokusebenza kakuhle kweFoton SAUVANA, ungazibonakalisa, udibanise kwihlabathi kwaye wonwabele ubomi bakho bokuhamba ngokugqibeleleyo.
ICummins ISF2.8 injini yedizili esebenza kakuhle
Inkqubo yokungenisa i-Turnocharged
I-BOSCH elawulwa ngombane ngoxinzelelo oluphezulu kwinkqubo yokufaka inaliti yombane
Inkqubo ye-EGR (Exhaust Gas Recirculation) kunye ne-DOC (Diesel Oxidation Catalyst) itekhnoloji
Ukudibanisa kwindalo kunye nembonakalo entle akufuneki mibingelelo yokhuseleko.
INDAWO YOKULONDOLOZA IPRETES
Ibhanti lesitulo liza kuqala libethelelwe kwaye litshixiwe ukunciphisa ifuthe kwizifuba zabakhweli
Ukuthintela amavili angaphambili nangasemva ekutshixeni,
I-2H Imo ezimbini zokuqhuba, le ndlela ilungele indlela ethe tyaba
I-AUTO imo enamavili amane, akukho umahluko weziko lokutshixa, le ndlela ilungele inkqubo yendlela entsonkothileyo ejikeleze i-shaft torque ngokweemeko zendlela ezabiwe ngokuzenzekelayo, i-torque yangaphambili ye-0-50% inokwabiwa.
Imowudi ye-4L yesantya esisezantsi yokuqhuba enamavili amane, isitshixo umahluko wendawo, le ndlela ilungele ukunamathela okungalunganga kweemeko zendlela ezimbi, umphambili we-asi engaphambili nangasemva 50:50